Amma illee waanuma keenyaan mul’anna!! Didne maallattoo gabrummaa, olkaafne mallattoo bilisummaa!!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAmma illee waanuma keenyaan mul’anna!! Didne maallattoo gabrummaa, olkaafne mallattoo bilisummaa!!!
Amma illee waanuma keenyaan mul’anna!!
Didne maallattoo gabrummaa, olkaafne mallattoo bilisummaa!!!
Part 3 and Historical video.
Back in 1996 the Mayer of Ambo at the time declered that the Oromo Liberation Front( OLF) was dead in Ambo. To symbolically demonistrate the death, he burned part of the Resistance Flag and burried the rest in public. On july 15, 2018, those who knew the story mentioned to the visisting OLF leadership, and the informants also located where that Flag was buried. 22 years later,as you can see from the video the OLF leadership errected a flag pole with the Resistance (OLF) flag on at the same place that the other flag was burried.
***As Long as the Oromo people are alive, OLF will never die!
Adoolessa 15/2010 Baalee Goobbaa
Guyyaa kaleessaa fi har’as dhimma ijaarsa siidaa goota Oromoo kabajamaafi jaalatamaa sababeeffateen walitti bu’iinsa ummata tokkummaan, jaalalaafi waliigalteen waliin jiraataa ture jiddutti uumameen badiinsa lubbuu namaafi miidhaa qaamaa,akkasumas qabeenyarra gaheef W/Dhi/Kom/Mot/Godina Baalee gadda guddaa itti dhagahame ibsa.
Gochi kun amantaas ta’ee saba bakka kan kan bu’uu miti.
Gocha kana duubaan warroota Oromoon qe’ee isaatti mataa gadi qabatee akka jiraatu fedhu,warroota muslima jibban osoo hin taane warroota Oromoo jibban,warroota faayidaan isaanii jala tuqame, namoota olaantummaan saamaa turan,warroota tokkummaa ummata Oromoo balleessuun garagara facaasuu barbaadu, warroota nu malee kan hafe namaa miti jedhu,warroota jeequmsarraa bu’aa barbaadan,warreen siyaasaan kasaarantu jira.
kanaaf amma dubbii qaruutummaan itti deemuu gaafata malee kaayyoo isaanii galmaan gahuuf humna ta’uufi hin qabnu.
Shirri diinaa injifannoo ummataa duubatti deebisuuf xaxamaa jiru kun akka dhaabbatu godhuuf rakkoon kun akka iddoo birootti hin babal’anneef dhimmichi dhimma amantaafi sabaa akka hin ta’n hubannoo ummataa cimsuun barbaachisaadha.
qaamoleen nageenyaa,hoggansa, qeerroofi ummanni madda warroota yaada kana gara amantaafi sabummaatti harkisuun ummatatti fakkeessanii jeequmsa uumuun kaayyoo diinaa galmaan gahuuf socho’anii adda baasuun ummatni shira kanatti dammaqee karaa ijaarameen shira kana akka fashaleessuuf hojii saaxiluu hojjechuutu irraa eeggama.
Ummatni Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaan isaa akka cimu, dhimmoota tokkummaa isaa diiguu danda’an irraa akka of eegu godhuun injifannoo wareegamaan argate kana bakka hundatti waardiyaa ta’ee akka tikfatu godhuun barbaachisaadha.
Bakka hundatti tokkummaan Oromoo akka cimu,injifannoon argame akka tiikfamu,ol’aantummaan seeraa akka kabajamuu fi nageenyi waara’aan akka mirkanaa’u Qeerroo fi qaamotni nageenyaa waliin socho’uu qabu.
Goobba keessa akkanatti Alaabaa Menelik dhaabbatan. Dhuguma kanatu dhimma Amantiitii??? Dhugaa dhoksitanii hin baatan. Haqni Afaan qabnaan funyaaniin dubbata
ወሎ ኦሮሞ ነው
ወሎ ኦሮሞ ነው 100%
የቀድሞው መሰሪ መለስ ዜናዊ ለፖለቲካ ፍጆታም ቢሆን እውነት ይናገራል
Har’a Magaalaa Dirree Dawaa, Ganda Jarba Awwadayitti sagantaa qopheeffame dha. Uummatni waan dheebote qaba. Sana barbaada!
Ergaa gabaabdu waan qabsoo qeerroo fi waca habashoota irratti presedant mootummaa naanno oromiyaa duraani obbo juneeydii saaddoo irraa fi ergaa dr.abiyiif
Diddaa Gobbaa, Oromiyaa Kibba Bahaa